यसरी बनाउनुहोस् घरमै बफ तथा चिकेन छोयला Canada Nepal
मासुका पारखीका लागि छोयला रोजाइमा पर्ने परिकार हो । यो खाना जति स्वादिष्ट छ, बनाउन पनि उत्तिकै सजिलो छ । हाम्रो भान्सामा पाइने सामग्रीबाट छोयला सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ ।
बफ/चिकेन छोयलाका लागि आवश्यक सामग्री - बफ तथा चिकेनको मासु, तेल,खुर्सानी, प्याज, टमाटर, हरियो धनियाँ, बेसार, नुन, गरम मसला, मिट मसला, धुलो खुर्सानी, लसुन अदुवाको पेस्ट
मासुलाई बेँसार मोलेर लामो आकारमा काट्ने र २–३ दिनसम्म घाममा सुकाउने । यो मासुलाई आगोमा पनि सेक्न सकिन्छ । आधा सुकेको मासु सुकुटीका लागि उपयुक्त हुन्छ । मासुलाई सानो सानो टुक्रामा काट्ने ।
प्यानमा तेल तताएर त्यसमा हरियो खुर्सानी, लसुन अदुवाको पेस्ट, बेसार, नुन, गरम मसला राख्ने र त्यसलाई काटेर राखेको मासुसँग मोल्ने । स्वादअनुसार हरियो प्याज र लसुन पनि काटेर राख्ने । अन्त्यमा हरियो धनियाँ राखेपछि छोयला खानका लागि तयार हुन्छ ।
आश्विन २७, २०७८ बुधवार ११:५७:३२ बजे : प्रकाशित
यी १५ टिप्स जो किचेनमा खाना पकाउँदा महिला पुरुष दुवैलाई उपयुक्त हुन्छ
काठमाडौँ। विशेष गरी दिनमा महिलाको आधाभन्दा बढी समय किचेनमै बित्ने गर्छ । खाना पकाउँदा साना साना कुराले पनि समस्या उत्पन्न गराउँछ । कहिले तेल बढी हालिन्छ, कहिले नुन । कहिले खुर्सानी बढी हुन्छ त कहिले के । यहाँ दिइएका १५ टिप्स महिला पुरुष दुवैका लागि सहयोगी सावित हुन सक्छ ।
६. पकौडाको मिश्रणमा एक टिस्पुन तातो तेल हालिदिनुस्, पकौडा नरम हुन्छ ।
९. भिन्डी (रामतोरिया) को तरकारी बनाउने बेला थोरै दहि हालिदिनुस, तरकारी भाँडामा लाग्दैन ।
१४. फ्रेन्च फाइ भुट्नुअघि आलु र थोरै मैदा हालिदिनुस्, क्रिस्पी बन्छ ।
१५. चिनीलाई प्लास्टिकको ब्यागमा हालेर फ्रिजमा राखिदिनुस्, चिनी आपसमा टाँसिदैन ।
माघ २, २०७७ शुक्रवार १३:५५:१० बजे : प्रकाशित
# खाना पकाउँदा
दशैंमा घरैमा यसरी बनाउनुहोस् रेस्टुरेण्टको जस्तै सुकुटी
बफ/चिकेन सुकुटी हरेक उमेर समूहका मानिसले मन पराउँछन् । दसैंमा सुकुटीसँग चिउरा खाने जमात धेरै भेटिन्छन् । सबैको भान्सामा पाक्ने सुकुटी कसरी बनाउने यसको बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छ ।
मासुलाई बेसारले मोलेर लामो आकारमा काट्ने र २–३ दिनसम्म घाममा सुकाउने । यो मासुलाई आगोमा पनि सेक्न सकिन्छ । आधा सुकेको मासु सुकुटीका लागि उपयुक्त हुन्छ । मासुलाई सानो सानो टुक्रामा काट्ने । तातो भाँडामा तेल राखेर प्याज हालेर खैरो हुनेगरी भुट्ने । त्यसमा हरियो खुर्सानी, लसुन अदुवाको पेस्ट, बेसार, नुन । गरम मसला पालैपालो हालेर चलाउने । यो मिश्रण डढ्न दिन हँुदैन ।
त्यसैले आगो सानो पार्ने । त्यसपछि काटेर राखेको सुकुटीलाई हालेर राम्ररी चलाउने । स्वाद मन पराउनेले टमाटर काटेर राख्न पनि सकिन्छ । मासुलाई केहीबेर छोपेपछि त्यसमा मिट मसला थोरै राखेर काटेको हरियो धनियो राखेपछि सुकुटी खानका लागि तयार हुन्छ ।
आश्विन २७, २०७८ बुधवार ०८:५१:१४ बजे : प्रकाशित
मासु पारखीहरूको रोजाइमा पर्ने परिकार हो चिकेन रोष्ट । हरेक उमेर समूहका मानिसले रोस्ट मन पराउँछन् । रोष्ट बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ । यसरी सजिलै बनाउनुहोस् चिकेन रोस्ट ।
आवश्यक सामग्री- चिकेन आवश्यकताअनुसार, तेल, बेसार, नुन, गरम मसला, मिट मसला, धुलो खुर्सानी, लसुन, अदुवाको पेस्ट, कागती, अण्डा
बनाउने तरिका - मासुमा बेसार, नुन, गरम मसला, मिट मसला, धुलो खुर्सानी, लसुन, अदुवाको पेस्टसँगै कागतीको रस र अण्डा राखेर राम्ररी मोल्ने र कम्तिमा आधा घण्टाका लागि छोपेर राख्ने ।
आश्विन २८, २०७८ बिहिवार १९:५९:३८ बजे : प्रकाशित
# चिकेन रोस्ट